Manazava ny fomba fampiasana tranonkala fandroahana ho an'ny maimaim-poana ny Semalt
pejy mba handraisana ireo angona ilaina rehetra. Content Grabber dia fitaovana maimaim-poana amin'ny tranonkala noforonina mba hiatrehana na dia amin'ny karazan-drakitra maro aza.
Voalohany indrindra, azonao atao ny manandrana ny fizotran'ny fizotran'ny solontena hanombohana. Mandritra ny vanim-potoana fitsapana dia afaka hivoatra ho anao ny solosaina iray maimaimpoana maotina fa tsotra. Na izany aza, mila takatrao fa ny mpitsabo dia noforonina mba hampiseho ny mety ho azy ary tsy afaka mifanaraka amin'izay ilainao rehetra izy. Ankoatra izany, afaka mahazo mpitsikilo iray ihany ianao amin'ny tranonkala tokana.
Raha mila tranokala fanangona-tranonkala ianao, izay mety hikirakira amin'ny asa an-tselatra sasantsasany na te hanakona ny angona avy amin'ny vohikala maro dia tsy maintsy mividy ny volany ianao. Na izany aza, eo am-piandohan'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo safidy Content Grabber azonao atao maimaim-poana ianao. Noho izany dia azonao atao ny mangataka tranokala maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny demo@contengrabber.com. Amin'ny ankapobeny dia hahazo mpitsoa-ponenana maimaim-poana ianao ao anatin'ny ora 24 ora aorian'ny fangatahana fangatahana. Na izany aza, mety haharitra kokoa izy io raha mandefa ny fangatahana mandritra ny fotoana be atao.
Dingana fangatahana tranokala maimaimpoana maimaim-poana
Voalohany indrindra, mila manome URL aloha ianao. Ity no URL ho an'ny pejy Internet izay hanomboka hametrahana angon-drakitra ny fahafahanao maimaimpoana.
Tsy maintsy manazava ny karazana angona tianao haka amin'ny tranokalanao ianao. Ny fomba mahomby indrindra hahatratrarana izany dia amin'ny famoahana ny takelaka ho an'ny tranonkala miaraka amin'ny angon-drakitra takiana.
Tokony hialana amin'ny famoahana torolàlana manjavozavo toy ny "ny angona rehetra tokony havoaka ao amin'ny tranokala", satria tsy voatery hoe tena ilainao tokoa izany. Na izany aza, raha hitanao fa mila ny data rehetra ao amin'ny tranonkalanao ianao, ampiasao Website Downloader fa tsy Content Grabber.
Ilainao koa ny mamaritra ny format-drakitra izay tena mety aminao. Ny format mahazatra dia XML, CSV, ary Excel.
Ny dingana manaraka dia ny mandefa ny fampahalalana rehetra voatanisa etsy ambony amin'ny demo@contentgrabber.com ary mahazo valiny sy sombin-dahatsoratra amin'ny santionany mandritra ny 24 ora orinasa na kely kokoa amin'ny tranga sasany.
Mametraka ny andrana fizarana ny Content Grabber mba hahafantarana ny fitaovana. Hahafahana mandefa solosaina entana ianao, izay azo alaina ao amin'ny Content Grabber amin'ny fisafidianana ny Import Agent avy amin'ny menu menu an'ny Content Grabber.
Azonao ampiasaina amin'ny tranokala Content Grabber Run amin'izao fotoana izao ny mpanafika tranonkala. Tokony hotadidinao fa ny famandrihana dia hijanona avy hatrany aorian'ny pejy 100 pejy Source .